FBC - Oduu biyya keessaa
Oduu biyya keessaa (8991)
Naannoowwan Arfaasaan oomishaniif roobni abdachiisan jira jedhame
Finfinnee, Bitootessa 22, 2008(FBC) – Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa naannoowwan rooba arfaasaan oomishaniif roobni ga’aan ni jiraata jedhe.
Jaappaan Ityoophiyaaf deeggarsa Doolaara Ameerikaa miiliyoona 30.1 laatte
Finfinnee, Bitootessa 22, 2008(FBC) – Jaappaan lammiilee hongeen miidhaman, baqattoota fi qonnaan bultoota deeggaruufi Doolaara Ameerikaa miiliyoona 30.1 nan kenna kan jette.
Hidhi Haaromsaa Itiyoophiyaa waanta barootaaf arguuf hawwame kan agarsiisedha jedhame
Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Ijaarsi Hidhi Haaromsaa Guddichi bu’aa ogummaa injinariingii dinqisiisaa qofaa osoo hin-taane waanta Itiyoophiyaanonni barootaaf arguu hawwan kan argisiisedha jedhan Ministirri Hogganaa Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Obbo Geetaachoo Raddaa.
Godina Harargee Bahaatti namootni sababa hongeetiin gargaarsi dhihaachaafi jiru kuma 700 fi kuma 45 ga’uu himame
Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Godina Harargee Bahaatti namoonni sababa hongeetiin miidhamanii gargaarsi dhihaachaafii jiru kuma 700 fi kuma 45 ga'uu Waajjirri Ittisa Balaa fi Qophaa'inaa godinichaa beeksise.
Gabaasi waliigalteewwan invastimantii fi faayidaa isaanii irratti xiyyeeffate ifoomsamuufi
Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Koomishiniin Dinagdee Afriikaa waliigalteewwan invastimantii gama lamaanii fi faayidaa isaaniirratti xiyyeeffate ifoomsuufi.
Guyyaan hundeeffama Dh.D.U.O waggaa 26ffaan Galma Abbaa gadaatti kabajamaa jira
Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Guyyaa har`aa Ayyaanni hundeeffama Dh.D.U.O waggaan 26ffaan sadarkaa naannootti marii paanaalii sirnaa fi sagantaalee adda addaatiin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kabajamaa jira.
Ayyaanni hundeeffama Dh.D.U.O sadarkaa naannootiin har’a kabajameera
Finfinnee Bitootessa 21 2008(FBC) Ayyaanni hundeeffama waggaa 26ffaa dhaabbata Demookraatawa ummata Oromoo har’a Adaamaatti sadarkaa Naannootiin kabajameera.
Imalli ijaarsa hidhichaa hanga ammaa seeronni idil-addunyaa biyyoota yaa’a lagichaa gidduutti hojiirra akka oolan daandii saaqeera: hayyulee
Hidhi Haaromsa Ityoophiyaa gamtummaa kan uume fi galaa abdii keenyati – Jiraattota Finfinnee
Tajaajila fooyya’aa hoospitaalonni galmeessisan badhaafaman
Yunvarsitichi barnoota digrii 2ffaa teelee koomuniikeeshin injiinariingin laachuu jalqabuufi